Guulaha Diblumaasiyadeed ee Somaliland ka Gaadhay Shirkii Jabuuti iyo Doorkii Safiirka Somaliland u fadhiya Jabuuti Ambassador Cabdifatax Siciid… | Yool News
Guulaha Diblumaasiyadeed ee Somaliland ka Gaadhay Shirkii Jabuuti iyo Doorkii Safiirka Somaliland u fadhiya Jabuuti Ambassador Cabdifatax Siciid…
June 20, 2020 - Written by Yool News
Hargeysa(Yool)-Guulaha Diblumaasiyadeed ee dhowaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi iyo Waftigiisi ka gaadheen, waa mid taarikhiya, isla markaana mudan in loogu hambalyeeyo Madaxweynaha iyo cid kastoo ka shaqaysayba.
Hadaba waxa xusid mudan, guushaa Qaranka Somaliland kasoo gaadhay shirkii Jabuuti, shaqsiyaadkii kaalinta sare ee Diblumaasiyadeed ku lahaa, Isla markaana sida weyn u shaxeeyey, Ugana Shaqeeyey waxa kowka ahaa Safiirka Somaliland u fadhiya Jabuuti Ambassador Cabdifatax Siciid Axmed oo isaggu dawlada Jabuuti kasoo dhameeyey in meeqaam lamida ka wufuuda kale ee Shirka imanaysa lagu soo dhoweeyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi.
Sidoo kale, waxa uu Safiirku ku guulaystay inuu Madaxweynihiisa lagu soo dhoweeyo meeqaamkii abid dawlada Jabuuti kusoo dhoweyso Madaxweyne Somaliland ka socda oo Jabuuti tagay.
Safiir Cabdifatax Siciid Axmed waxa kaloo uu ku guulaystay inuu doorweyn ka ciyaaro guddiyada Wadahadalada Somaliland iyo Somaliya, isagoo xubin sare oo firfircoon ka ahaa Guddida Farsamo ee Somaliland. Sidoo kale waxa uu maalmihii adkaa ee Shirka Safiirka Somaliland u fadhiya Jabuuti Ambassador Cabdifatax Siciid Axmed ku guulaystay inuu sacaad walba xidhiidhiyo waftiga Somaliland iyo Xukumada Djibouti.
Si kastaba ha haatee, Hoggaamiye kastaa waxa guul-gaadhsiiya, cidda garbihiisa joogta, waxaana la isweydiin karaa Ummadi ma noolaan kartaa Hogaan la´aan/ Madaxweyne la´aan? Jawaabtu waa Maya! Ma dhici karto inay jirto, ummad aan lahayn Hogaan, toosiya, Aayaheeda ka taliya, magaceeda iyo sumcadeeda-na kor u qaada.
Hogaanku waxa uu lamid yahay abuurka qofka Bini-aadamka ahi. qaab-dhismeedkiisa naf ahaaneed, mana jiro qof Nool oo bilaa Madax ahi oo noolada ama nafi ku jirto.